Iimaski, ukunyusa abaguli, iBhedi yeSibhedlele-iJBH yezoNyango
Wamkelekile kuAnhui JBH Medical
Funda oku ukwazi ngathi!
I-Anhui JBH Medical Apparatus Co., LTD yasekwa ngonyaka ka-2013 kunye neenkampani ezisixhenxe ezixhasayo kwaye zingumnini wesiseko semveliso esimiselweyo seehektare ezingama-78000. Inkampani esekwe kwimveliso ngokudityaniswa kwe-R & D kunye neqela lentengiso lehlabathi, elineemveliso zalo eziyilwe kunye neemveliso ze-ODM zokusebenzela imakethi yehlabathi, kungoku nje inabasebenzi abangaphezu kwama-500 abanemali ebhalisiweyo engaphezulu kwezigidi ezili-12 zeedola. Iimveliso ezinkulu zizibhedlele ezikrelekrele eziphathwayo, ukuphakanyiswa kwesigulana, ukulahla imaski ekhuselayo, kunye nazo zonke izixhobo ezinxulumene nezonyango. Kuvunyiwe yinkqubo esemgangathweni yamazwe aphesheya, i-ISO 9001, i-ISO14001, i-ISO 13485 kunye ne-SGS eqinisekisiweyo yelabhoratri, ngelixa iimveliso ziqinisekisiwe nge-FDA, CE, kunye neCFDA, ukuthengisa kumazwe angama-70. Besihamba kwaye sikhula siye empumelelweni ngokunyaniseka, uvuyo kunye nolwaneliseko.
Kutheni ukhetha iAnhui JBH yezoNyango?
Iimveliso zidibana ne-ISO, CE, kunye neMigangatho yeFDA. Iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Umzi-mveliso ogunyazisiweyo we-SGS.
Iqela eliqeqeshwe ngokupheleleyo lokukhathalela abathengi, lilungele ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Sigcina phantsi kweendleko ezingqongqo zeenkqubo zokulawula umgangatho.
Sithatha nawuphi na umngeni, ngaphandle kwesikhalazo. Soze siphumle kwizindlu zethu zangaphantsi.
Igumbi loKhathalelo lweKhaya loMbane lwaBantu abaKhubazekileyo 1.V ....
Isibhedlele Esisongelayo sabantu abaKhubazekileyo kulula ...
Imigca emi-3, i-FDA, i-CE ivume imaski yokulahla ...
I-FDA, i-CE evunyiweyo yemodeli: JBHF001 Disposa ...
Ubukhulu ngokubanzi 1110 * 640 * 1480mm Duty cycl ...
Enamavili enamavili yokudlulisa Umonde eziphathekayo phakamisa phakamisa f ...
Ubungakanani bebonke 1510 * 735 * 1460 mm Uxanduva lomsebenzi ...
Izinto zokucoca ulwelo iMask
Isibhedlele esibhedlele endaweni yokulawula kude, Ibhedi yesigulana esibhedlele, Ibhedi yokuhanjiswa kwabasebenzi, ibhedi yesibhedlele eqhutywa ngemoto, imaski yomlomo wobuso, Imaski yobuso elahliweyo kwi-intanethi,
Ibhedi yokuhanjiswa kwabasebenzi, Isibhedlele esibhedlele endaweni yokulawula kude, Imaski yobuso elahliweyo kwi-intanethi, imaski yomlomo wobuso, ibhedi yesibhedlele eqhutywa ngemoto, Ibhedi yesigulana esibhedlele,